Puntland oo beenisay iney wadahadal la gashay maamulka Somaliland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe – Mareeg.com: Maamulka Puntland ayaa beeniyey war dhawaan ka soo baxay wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland, Maxamed Biixi Yoonis, kaasoo ahaa in ay wada-hadal siyaasadeed la yeesheen madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Cali Gaas xilligii uu ku sugnaa magaalada Bahra-dar ee dalka Itoobiya.
Wasiirka waxbarashada Puntland, Cali Xaaji Warsame oo ka mid ahaa wefdigii Madaxweynaha Puntland u raacey dalka Itoobiya markii lagu casumey shirkii Tana Forum oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa beeniyey in wefdigoodu la shireen xubno ka socday Somaliland.
Cali Xaaji ayaa si cad u sheegay in uusan dhicin wax wada-hadal ah oo ay la yeesheen xubnihii Soomaaliland shirka ka joogay, wuxuuse sheegay in la kulmi karo wakhtiga kooban oo laga nasayo shirarka, kaasna ma aha wax macno samayn kara, sida uu hadalka u dhigay.
“Wakhtiga la fadhiyo ama shaah la cabayo ama qaxwaha loo fadhiyo waa lays arkayaa waana la isa salaamayaa dad Soomaali ah baa la yahay, mase oggi wax kulan ah oo rasmi ah oo dhexmaray Puntland iyo Soomaaliland.” ayuu yiri Cali Xaaji Warsame.
Wasiirka ayaa sheegay in hadii uu dhacayo wada-hadal dhexmaraya Puntland iyo Soomaaliland uu noqon lahaa wax la isla ogyahay oo laga soo wada-tashaday, wuxuu cuskaday in aysan shirka u tegin in ay la kulmaan dhinacyo siyaasadeed.
Maxamed Biixi Yoonis oo ah wasiirka arrimaha debadda Somaliland ayaa markii uu kazoo laabtay shirkii Bahra-dar sheegay iney halkaas kula kulmeen madaxweynaha maamulka Puntland, islamarkaana u sheegeen halka ay tahay xuduuda Somaliland.
Labada maamul ayaa isku haya gobollada Sool iyo Sanaag, waxaana dhawaana lagu sigtay dagaal kadib markii bishii hore ciidamada Somaliland qabsadeen degmada Taleex, hase ahaatee ay dib uga baxeen.